မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths V | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Business & Economics » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths V	1
Posted by Kyaemon on May 23, 2016 in Business & Economics, Community & Society, Education, Think Different | 1 comment
နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုက ရေကာတာ အကြောင်းအပြင်၊ ၎င်းနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ ငလျင် အကြောင်းတွေကိုပါ အတော် စိတ်ဝင်စားကြတယ်၊
ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ့်ထက်ကျွမ်းကျင်သူများဆီ ချဉ်းကပ်ပြီး ဆည်းပူးလေ့လာ ဖလှယ်ရတယ် “ခြေသုပ်ပုဆိုး မြွေစွယ်ကျိုးသို့”လိုပေါ့ဗျား၊
သူဋ္ဌေးသားဂိုက်လိုထုတ်ပြီး ဝါယမ မစိုက်ရင် မရနိုင်ပါ၊
ကိုယ့် “ဖားရေတွင်း” နဲ့ဘဲပျော်ပိုက်ပြီး ကျေနပ်နေရင်လဲ မရနိုင်ပါ၊
is an international non-governmental organization dedicated to the sharing of professional information and knowledge of the design, construction, maintenance, and impact of large dams. It was founded in 1928 and has its central office in Paris, France. It consists of over 90 member national committees which haveatotal membership of about 10,000 individuals. Official languages of the commission are English and French.
၁၉၂၈ ခုနှစ် ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့မှာ” နိုင်ငံတကာ အကြီးစားရေကာတာများ ကော်မရှင်
ICOLD ” ဆိုတဲ့ အသင်းကြီး ကိုစုပေါင်းပြီး ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့တယ်၊ အသင်းဝင်ဆို ခုနေ တသောင်းကျော်ရှိတယ်၊
ဒိအပြင် ၎င်း၏ လက်အောက်ခံ “ငလျင်ရေးရာကော်မတီအဖွဲ့” ကိုလဲဖွဲ့စည်းကာ ဆွစ်စလန် မှာ၊ရုံးဖွင့် အခြေစိုက်တယ်၊
ယင်းငလျင်ကော်မတီရဲ့ ဥက္ကဌ ကျွမ်းကျင်သူ Martin Wieland မာတင် ဝိုင်လန် နဲ့အဖွဲ့ဝင်တို့ကပြုစု
တင်ပြတာတွေကို အဆိုပါ ရေကာတာအသင်းကြီးက စီစစ်ပြီးမှ အတည်ပြု ထောက်ခံတယ်၊
ပြီးတော့ အများအကျိုးငှါအသင်းကြီး ICOLDအနေနဲ့အဲဒီ ရေးသားချက်တွေ နဲ့ ထုတ်ပြန်ကျေညာချက်တွေကို ကမ္ဘာအနှံ့အခမဲ့ ထုတ်ပြန်ဝေငှတယ်၊
၎င်းစာတမ်းတွေမှ ရှာဖွေ ကောက်နုတ်ပြီး အောက်ပါအတိုင်းတင်ပြလိုက်တယ်၊မြန်မာလိုလဲ အချိန်ပေးပြီးဘာသာပြန်တာ
လက်ဝဲဘက် က ကွန်ဂရစ် အင်္ဂတေ ချပ်အထူပြားကြီးပါ၊
ကျောက်တွေကိုအောက်ခင်း နဲ့ အချက်အချာနေရာတွေမှာခင်း
အမဲစက်ကလေး က ကျောက်ခဲ ပုံချ Dumped Rockfill တဲ့ရေကာတာ
အဖြူစက်ကလေးတွေက ကျောက်ခဲသိပ်သည်း စွာဖိဆီး ထားတဲ့ Compacted Rockfill ရေကာတာ
Rockfill ရေကာတာတွေပိုမြင့်တက်လာပြီးပိုလဲခေတ်စားလာတယ် နောက်ဆုံး ဇယား တန်း က ၁၉၉၀ မှ ၂၀၀၀ ထိ ၁၀ နှစ် ကာလ
မှာ ပင် Rockfill ကျောက်ဖို့ရေကာတာ ၆၈ လုံး
ငလျင်ကြောင့် ရေအများအစား သိုလှောင်ထားတဲ့ ဆည်ကြီး ရေကာတာ ကြီးတွေ ပျက်ကျ ပြိုကျပြီးတော့ လူအသက်ဆုံးရှုံးရတာ ခုထိမရှိပါ၊
တရုပ်ပြည်” ဝိန်ချွန်” ငလျင်ဖြစ်တုန်းက “လုံမန်ချန်” မြေငလျင်ကျော အနားမှာရှိတဲ့ “ဇီပင်ပု” ဆည်ကြီး ကိုသွားရောက်ပြီးလေ့လာရာ သိုလှောင် ရေ
ကြောင့် ဘဲ ငလျင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဟုတ်မဟုတ်စီစစ်တော့ ဒီလို ဖြစ်လာတယ်လို့တပ်အပ်မပြောနိုင်၊
ရေကာတာ ဆောက်လုပ်ရေး အတတ်ပညာ နည်းလမ်းတွေရှိတယ်
(ပညာပါပါ)ဒီဇိုင်း ကောင်းကောင်းပုံစွဲခဲ့ရင် ငလျင်ဒဏ်ကိုတွန်းလှန်
ခုခံနိုင်တဲ့ ကိုယ်ခံအတွင်းအင်အားကို တပ်ဆင်ပြီးသားဖြစ်မယ်
ရေကာတာ ဆည် အသေးစား ခပ်များများ က ငလျင်ကြီးတွေရဲ့ဒဏ်ရာ
ဒဏ်ချက် တွေ ကိုခံလိုက်ရ သော်လည်း
ရေကာတာ ဆည်ကြီးတွေ တလုံးတလေတောင် မ ပြက်ကျ မ ပြို ခဲ့
အချက်၊ ကျားကြောက်လို့ရှင်ကြီးကိုး လို သတိပြုရန် ငွေကုန်လက်ပန်း မဖြစ်ဘို့ပါ)
ရေကာတာတွေက ဘယ်လိုတုန့်ပြန်မယ်ဆိုတာ သေချာမ သိလို့ အမြဲ လေ့လာ အကဲဖြတ်နေရအုန်းမှာ
နှစ်ပေါင်း တသောင်း မှ တကြိမ်သာလှုပ်မဲ့
ငလျင်ကြီး ကိုကျော်လွှားနိုင်မယ် ဆိုရင်
အဲဒီရေကာတာကြီးက အန္တရာယ် ကင်း စိတ်ချ
လို့ ICOLD “မြေငလျင်ရေးရာကော်မတီ ဥက္ကဌ Martin မာတင် ကပြော၊
မြစ်ဆုံရေကာတာနဲ့ပတ်သက်လို့စီပီအိုင်အုက္ကဌ က ဒီအတိုင်းမီဒီယာ ကိုထုတ်ဖော်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်
မြစ်ဆုံ ဒီဇိုင်းမှာလဲ အသင်းကြီးရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် အဆင့်မြင့်စံချိန်စံညွှန်းပါဝင်ရေးစွဲထားကြောင်းထုတ်ဖော်ခဲ့
ရေကာတာအကြီးစား ကမြေငလျင်သင့်ခဲ့ ရင်၊
ရေဘေးကိစ္စ တွေကို ကိုင်တွယ် သလို အလားတူ
ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုအသစ်တဖန်ပြောင်းလဲပြုပြင်တဲ့အတွက် ရှေ့ပိုင်းကဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ရေကာတာတွေဟာ ခေတ်မမှီတော့ပါ၊
၁၉၈၉မတိုင်မီကရေကာတာအားလုံးကို ဘေးဥပါဒ် ရှိမရှိ
ပြန်လဲ သုံးသပ်ဘို့လို၊ (အရှေ့တိုင်း ဖွံ့ဖြိုးစနိုင်ငံ ကရေကာတာတွေကိုဘဲမဲနေမဲ့အစား
ရေကာတာဆည် မှ သိုလှောင်ရေ ကြောင့်
ငလျင် ဖြစ်လာအောင်ဖန်နိုင် တယ်
ဆိုတဲ့ အထင် ကို တသီးတခြား
“မှု” နေ စဉ်းစားနေဘို့ မ လို
ဒီကထုတ်ပြန်ချက် (အမှတ် ၁၂၀)ရဲ့ စံချိန်စံညွှန်း ပေကြိုးအတိုင်းအတာ
ကိုသာလိုက်နာရင် လုံလောက်တယ် (လုံခြုံကာမိတယ်)
မြစ်ဆုံရေကာတာ က CFRD (Concrete Faced Rock Fill Dam ) (ကွန်ဂရစ်မျက်နှာ ကျောက်ခဲဖို့) ရေကာတာ
မြေကြီး ရွှံ့နွံနဲ့မဟုတ် ကွန်ဂရစ်နဲ့ ကျောက်ခဲဖို့ ဆိုတော့ ပိုခိုင်ခံ့ ပိုကြာရှည်ခံ၊
ရေစိမ့်ဝင်တာ ကို ကာကွယ်တားဆီးဘို့ (ဝါ) သက်သာဘို့သိုလှောင်ရေ
ဘက်ကိုမျက်ပြုပြီး တပေ ကနေ သုံးပေထိ ထူတဲ့ ကွန်ဂရစ် အချပ်ကြီးကိုတပါတည်း
“ခု (၂၀၀၀ ခုနှစ်) ဆို CFRD ရေကာတာ က ခေတ်စား ” (ဇယား ကြည့်)
တရုပ်ရေကာတာ ဆောက်လုပ်ရာမှာ ရေမဝင်ရအောင် ကွန်ကရစ် အင်းဂတေ တို့ကပ်တရာ တို့ကို
ရေသိုလှောင်ဘက် (ရေအဝင်ဘက်) မှာသေချာခင်းနေပုံ
လက်ဝဲ က ကွန်ကရစ် အင်းဂတေ အချပ်ပြားကြီး
၎င်းရဲ့အောက်ခြေမှာ အခြေခိုင်ခံ့ပြီး ရေလုံ ဇုံမှာ ကျောက်ခင်း
ကျောက်ဖို့ ထားလို့ အခြားရေကာတာ (ဥပမာ မြေဖို့) အမျိုးအစားတို့ထက်
ရေစိမ့်ဝင် leakage/seepage ခံနိုင်ရည် ရာခိုင်နှုန်း ပိကြီးi
(ဆိုလိုတာက ကျောက်ခဲကမြေကြီးထက် မာ ကျော တောင့်တင်း လို့ မြေ
ဖို့ရေကာတာ ထက် ပိုမြင့်အောင်ဆောက်လုပ် နိုင်၊
ဒိပြင် မြေဖို့ရေကာတာကရေစိမ့်ဝင်တာကို ကျောက်ဖို့ရေကာတာ
လောက် ခံနိုင်ရည် မရှိ၊
ကျောက်ခဲတွေက စိမ့်ဝင်လာတဲ့ရေ ကိုပြန်
Brazil, Mexico, China ဆိုတဲ့ သုံး နိုင်ငံတွေ က ၁၂၅မီတာ(၄၁၀ ပေ) မှ ၁၈၀ မီတာ (၅၉၀ ပေ) ထိ အမြင့်ရှိရေကာတာကြီး
၄ လုံးဆီကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့တယ်
ရေစိမ့်ဝင်တဲ့ နှုန်းမြင့်ပေမဲ့လဲ ရေကာတာအဆောက်အအုံကိုဒုက္ခမပေး၊
ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စ္စ္စ္စည်း (ကျောက်ခဲတုံးကလေး) တွေက ရေစိမ့်ဝင်တာကို လွယ်လွယ်နဲ့ပြန်စိမ့်ထွက်ပေး
ရေယိုစိမ့်ဝင်နှုန်း က ပိုမြင့်တယ်ဆိုပေမဲ့အအန္တရာယ် မရှိ ကြောင်းကို
ရေစိမ့်မဝင်ရအောင် အခြေခံ အတားအဆီးဟာ သိုလှောင်ရေ နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တဲ့ ကွန်ဂရစ်အချပ်ပြားကြီး Face Slab ပါ၊
ကွန်ဂရစ်အချပ်ပြားကြီးတွေမှာ အက်တာ ရေမလုံတာ အပေါက်ကလေးတွေ မ ရှိရအောင် အင်မတန်ဂရုစိုက်တယ်
ကျောက်ခဲကလေးRockfill တွေတို ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအောင်
တ လွှာပြီးတလွှာ အထပ်ထပ်လဲခင်းတယ်
ကမ္ဘာမှာ အမြင့်ဆုံး တရုပ်ပြည်က ပေ ၇၆၄ ရှိ Shuibuya ရှုဘုရ ရေကာတာ ဟာ
Rockfill CFRD ရေကာတာ အမျိုးအစားဖြစ်တယ်
အထက်ပါပုံတွေက Shuibuya ရှုဘုရ ရေကာတာ ဖြစ်ကြပြီး ရေစိမ့်မဝင်ရအောင် ရေအလာဘက်မှာကွန်ကရစ် ပြားကြီး တွေအချပ်လိုက်ခပ်ထူထူခင်းထားတယ်၊
တချပ်နဲ့တချပ်ကြားမှာလဲ ရေလုံအောင် ကော် ကပ်တရာ Seal နဲ့ပိတ်ပစ်တယ်၊
မြစ်ဆုံရေကာတာလုပ်နေရင်းတန်းလန်း ဆိုင်းငံ့ရတဲ့ CPI စီပီအိုင် ဆောက်လုပ်ရေး နဲ့ အပေါင်းပါတွေက ဒီဧရာမ ရေကာတာကို ဆောက်လုပ်ခဲ့တယ်
အမြင့် ပေ ၇၆၄ ရှိပြီး၊ ၂၀၀၂ ကစ လုပ်တာ ၂၀၀၈ မှာပြီးစီးခဲ့တယ်၊
ဂျပန် မှာလဲ Asphalt ကပ်တရာ နဲ့ ရေကာတာကိုရေလုံအောင်ခင်း
ရေကာတာ အစိတ်အပိုင်း အသီးသီး အတွက်
ရေလုံ အောင် သုံးဘို့ ပစ္စည်း တန်ဆာပလာအမျိုးမျိုး
ရေကာတာဆောက်လုပ်ရေး အတတ်ပညာ သင် တက္ကသိုလ်
တွေကို တရုပ်ပြည်မှာဖွင့်လှစ်ကာ ဘွဲ့လွန် ပါရဂူဘွဲ့သင် တန်း
အထိ ထားရှိတဲ့အပြင် ၎င်းအတွက် သုတေသန ဌာနတွေလဲ
အောက်ပုံကပေဂျင်း သုတေသနတနေရာ၊ ကျန်တာက တရုပ်ပြည်က
Mortar and epoxy ကော်တမျိုးနဲ့ချောမွေ့အောင် အချော ထပ်ကိုင်
သံကြိုးအကြီးကြီး သံအူတိုင်အကြီးကြီး နဲ့တောင်ကမ်းဘားကိုဖောက်ထွင်းပြီး
အထက်ပါပုံတွေကမလေးရှား ဘော်နီယို က ဘ ကွန်း ရေကာတာ ကျောက်ခဲဖို့ ကွန်ဂရစ်ပြားမျက်နှာစာ အတန်းအစား ဘဲ
အမြင့်က ၆၇၃ ပေဖြစ်ပြီး၊မလေးရှားမှာ အမြင့်ဆုံးနဲ့အကြီးဆုံး ကမ္ဘာမှာဆိုရင် ဒတိယ အမြင့်ဆုံး၊
၎င်းရေကာတာကို စီပီအိုင် နဲ့အပေါင်းပါ တို့ကဘဲ ဆောက်လုပ်
တာ ၂၀၁၁ မှာပြီးစီး
ယိုးဒယား က Sri Nakarin Rockfill CFRD ရေကာတာ
အီတာလီ က Arcichiaro Rockfill CFRD ရေကာတာ
ဒီလိုဘဲ ကွန်ကရစ် ခင်း
အာဖရိက Lesoto လီဆိုတို က Mohale Rockfill CFRD ရေကာတာ
ရေကာတာရဲ့အလယ်မှာအူတိုင်အဖြစ် ကပ်တရာ တွေသွန်းလောင်းကြိတ်ဖိတယ်၊
ရေသိုလှောင်ဘက်ကိုမျက်နှာပြုတဲ့ ရေကာတာ အခြမ်း ကိုကွန်ဂရစ် အချပ်ပြား ကြီးတည်ဆောက်နေပုံ
ဦးကြောင်ကြီး says: ဝသဘုံကို တရုတ်အစိုးရ အကူအညီပေးနေတာ ဟုတ်သလား တရုတ်သဘုံကြေးမုံဂျီး..